Terms And Condition - Chipiri Match - 50% kunowirirana kusvika £ 50 |
Terms And Condition – Chipiri Match - 50% kunowirirana kusvika £ 50
bhonasi Izvi zvichava tichishingaira pakati 2nd – 8fung February 2017 GMT.
Chete Profit uye Kurasikirwa (P&L) pamusoro vakasarudzwa mitambo slots, Superman, The Batman, Justice League uye The Green Lantern pakati 00:00 & 23:59 (GMT) pazuva kukurudzira achaverenga vakananga zvinodiwa kuti mune.
Ndiko kukurudzirwa vachapiwa paakavapa maererano mambure purofiti (mari chaiyo winnings) pamusoro cheap car insurance yakasarudzwa. Munguva chiitiko wako mambure P&L akaita dzakava kushoma pakati £ 10 winnings, muchagamuchira kwakasimukira chaizvo akaverenga panguva 50% yako kwakakomba P&L.
Kuti ave kukwikwidza pamitambo Win wedzera, vatambi kunge akaita risingamboshandisi dhipozita pamusoro £ 10 pazuva kukurudzira uye wagered musi Superman, The Batman, Justice League uye The Green Lantern.
Maximum yose hwina wedzera mari iri £ 50 bhonasi mari.
Standard bhonasi wagering zvinodiwa 30x inouya mari kushandisa pamberi bonuses kana dzavhara winnings inogona kutorwa.
Bhonasi mari pakupfuwa ichi
ushambadzi, anogona chete kushandiswa kutamba yedu mitambo slots.
General Terms uye Conditions apply.Management kuti mutongo wokupedzisira dzose nyaya.
Terms And Conditions – Losses back week all…